SomaliNet Magazine: FEBRAAYO 2003
ARRIMAHA BULSHADA: KASBASHADA QOYSKAAGA
Waxaan ognahay in qoysku yahay unugga bulshadu ay ka soo askunto kaaso ah mid ka kooban labada waalid iyo caruurtooda,wuxuuna ka abuurmaa guurka labada lamaane (wiilka iyo gabadha). Haddaba hormuudka qoysku waa labada waalid ,aabaha iyo hooyada kuwaas oo ah kuw
ARIMAHA BULSHADA - BARASHADA COMPUTERKA IYO KA BADBAADIDDA BURBURKA INTERNETKA
Sida ay dadka dunida Seddexaad (ie. Afrika) joogaa ugu baahan yihiin qalin iyo buug, ama Teebka wax lagu daabaco ayay daka Galbeedka joogaa ugu baahan yihiin Computer ay u adeegsadeen qoraalada ay u baahan yihiin maalin kasta.
Meel kastoo adduunka la joogaa waxay leedahay duruufo,
Haddaanu dib u milicsano xiriiradaas, waxaanu helaynaa raad xoog badan oo ilbaxnimooyinkaasi ay ku reebeen degaanka. Magacyadii degaanka loo yiqiin waxaa ka mid ahaa: dhulkii ganacsiga, dhulkii udgoonka, dhulkii hodantinimada, dhulkii caanaha iyo malabka. Masaaridii hor
Danbiga 18aad: Markhaati Beenaadka
Ilaahay wuxuu dadka mu?miniinta ah ku sheegay in ay yihiin kuwa aan beenta ku markhaati kicin. Fiiri Aayadda 72aad ee suuradda Al-furqaan.
Dhibaatooyin badan ayaa ka imaan kara haddii qof been ku markhaati kaco, Tusaale ahaan, haddii laba
FANKA IYO SUUGAANTA - ( SHEEKO TAXANE AH) ALLA MA IYADIIBAA ALLA MA ISAGIIBAA?
Nimankii nin ka mid ah ayaa yiri waa fikrad aad u wanaagsan ee bal Canbaro iyo Ahmedba ha loo yeero , si aan hawsha isaga dhamayno dhaqso. Markiiba waxa loo yeeray Canbaro oo yara gariiraysa, waligeedna aan mas-uuliyadan oo kalena qaban, welwel,wadnahoo garaacmaya,baqdin ay u baqayso Ahmed,
QURBAHA: SHARCIYADA GUURKA REER GALBEEDKA
Dadka Soomaalida oo ah Muslim ayaa markay soo galeen waddamada reer galbeedka waxaa ka hor imaaday dhaqan diin iyo sharciyo ka duwan kuwii ay kusoo koreen ama ay ka dhaxleen waaridkood. Hadaba ayadoo ay dadkan Muslimiinta ahi laga sugayo inay ku dhaqmaan sharciyada diinta Islaamka ayaa hada
Ila Tali: Walaalayaal waan idin salaamay dhamaantiin salaan kadib waxaan ahay gabar aan rumaysnayn jacaylka mana rumaysto nin kasta oo i dhaha waan ku jeclahay walaalayaal maxaa iigu wacan, waxaas iga jaahil bixiya arintaan.
Talo: Run ahaan
DHACDO RUN AH - QABIIL BAA DUMIYEY QOYSKEYGA!
Anigoo hoosta ka guryamaya ayaan ka soo dhaqaajiyey aabe iyo hooyo,hadaan la sii joogo lahaa oo sheekada la wadi lahaa waxaan qabaa inuu aabe hindisi lahaa su\_'aalo kale oo aan loo dirsan,sidaa daraadeed waxaa danta igu kaliftay inaan isaga soo tago meesha.
Waqtigu wuxuu socdaba xiisih
Waxaan ahay nin 30 sano kor u dhaafay oo aan xaas lahayn, waxaan leeyahay dukaan, waxaan ahay nin aad u dhawrsan oo toosan, Ilaahay ayaa mahaddaas iska leh. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dukaankayga soo galay haweenay ay ka muuqato xishood dheeraad ah iy
Waxaa su?aalaha ka jawaabay Shiilkh Abdulqadir/Sweden
Cudurdaarasho: Naga raalli ahaada dadka aanaan wali su?aalohooda ka jawaabin, culumadii aan u dirnay ayaan wali ka soo jawaabin.
Su?aal: Walaalayaal ilaah ha idin abaal mariyo dhamaan tiinba aduun iyo aakhirana liibaan
GABAY - CABDULQADIR XIRSI YAMYAM
Bilow gabay ba?kala rogan
Maanso baabka loo furay
Bismillaahi waa kow
Hirarka is barkaday iyo
Mowjado is buurtiyo
Garaaraha biyaha iyo
Baddu ku xaragotiyo
Iftiin baxay ma mooddaa
Baroorkeedka midabka ah
Tartamo ciyaareed oo si aad ah loo soo agaasimay ayaa dhawaan lagu qabtay xaafadda islii-Nairobi-Kenya. Tartamadaasi iyaga ahaa waxaa lagu sagootinayey guddoomiyihii hore ee isboortiga Soomaaliyeed ee jaaliyadda Soomaalida Nairobi Badal faarax oo isagu jagadaasi iska casilay muddo dheerna s
BARNAAMIJKA XIDDIGAHA - TABABARE CABDI MAXAMED CIYE-CABDI DHEERE
Cabdi Maxamed Ciye-oo bahda isboortiga ay ugu yeeraan Cabdi dheere- ayay taariikhdu xusaysaa inuu ka mid ahaa ciyaaryahannadii iyo tababarayaashii ugu qiimaha badnaa ee soo mara ciyaaraha kubbadda koleyga ee dalkeena Soomaaliya. Kooxdiisa kubbadda koleyga ee caanka ka
ARRIMAHA BULSHADA - ISTICMAALKA DAKHLIGAAGA
Waxaa lacagta inta badan lagu dhaleeceeya in ay tahay xoolo shaydaan oo aan la maamuli karin,lana ilaalin karin taasna waa mid dad badani maanta aaminsan yihiin, wayse ka duwan tahay saas oo waxaa lagu qeexi karaa lacagta hubka kaliya ee